I-Loft endlini yokudoba eyiqiniso - indawo emaphakathi - I-Airbnb
I-Loft endlini yokudoba eyiqiniso - indawo emaphakathi
Harderwijk, GE, i-Netherlands
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Erwin
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Okt 31.
Indlu ye-Atmospheric quirky enesakhiwo sendawo. Isikhala nezinsiza kuzimele ngokuphelele ngobumfihlo obuningi, buhlome ngakho konke ukunethezeka. Indawo yokungena yangasese, isitofu sokhuni (eduze nendawo yokushisisa), i-TV yedijithali, i-WiFi yokugezela kabili, ishawa, ikhishi elinohhavini, umshini wokuwasha, indlu yangasese, isidlali sokuqopha.
Itholakala edolobheni elidala laseHarderwijk. Ngokuqondile e-Vischmarkt enezindawo zokudlela eziphezulu kanye namamitha angu-50 ukusuka endaweni evuselelwe ye-boulevard enobhishi!, ama-marinas, nezindawo zokudlela eziphezulu ezihlukahlukene lapho unga-oda khona.
Igumbi elibanzi elikhangayo elinendawo yokulala esezingeni eliphezulu. Ikhishi elivulekile elinesiqandisi, isitofu, isiqandisi nomshini wokuwasha. Kukhona i-kitchenware kanye namakhambi nezinongo ezinhlobonhlobo kanye ne-pasta nelayisi. Igumbi lokugezela elivaliwe linebhavu eliphindwe kabili, ishawa kanye nendlu yangasese. Kunemishini yokugeza ehlukahlukene kanye nemaski. Igumbi linepaneli, isitofu sezinkuni kanye ne-TV yedijithali (KPN). Imidwebo, izithombe, izincwadi nezinsimbi zomculo ezihlukahlukene (iziginci ze-acoustic, i-violin, icilongo njll).
I-TV ene- I-Netflix, Isevisi evamile ye-cable kamabonakude, ikhebula ye-premium
ubusuku obungu-7 e- Harderwijk
4.58 out of 5 stars from 127 reviews
4.58 · 127 okushiwo abanye
Zonke izinsiza zedolobha zingaphakathi kwebanga lokuhamba (500m. Max). Amabha agcwele emkhathini, amasimu athokomele, izindawo zokudlela ezisuka kokukhethekile kuye 'konke ongakudla', amaShayina ;), ulwandle, i-boulevard kanye netheku kodwa futhi nesuphamakethe, iminyuziyamu nezitolo. Ngaphandle kwalokhu, i-loft inobumfihlo futhi ithule.
Uzohlala ngokuzimela kuleli gumbi, ngitholakala ngemibuzo, usizo noma amathiphu.
Hlola ezinye izinketho ezise- Harderwijk namaphethelo